အောင်ထွန်းဦး: အမေ - ၄
ဘ၀မှာ အောင်မြင်တဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်မှာ အပြင်းထန် ဆုံး ဆန္ဒတစ်ခုရှိပါတယ်..။ အဲ့ဒါကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကျွန်တော့်အတွက် စွန့်လွတ်အနစ်နာခံ ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ အမေ့ကို တစ်ခုခု ပြန်လည် ပေးဆပ်ချင်တာပါပဲ..။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့မှာ….
"အမေ… အမေ့ကို ကျွန်တော် တစ်ခုခုပေးချင်တယ်..။ တစ်ခုခု လုပ်ပေးချင်တယ်..၊ အမေ သားအပေါ်မှာ ချစ်ခဲ့သမျှ စွန့်လွတ်အနစ်နာခံခဲ့သမျှတွေအတွက် သား တစ်ခုခု ပြန်လည် ပေးဆပ်ချင်တယ်.."
အမေက ကျွန်တော့်ကို အံ့သြတဲ့ပုံစံနဲ့ကြည့်ပြီး
"သားက ဘာလို့ ဒီလိုထင်ရတာလဲ..။ သားအမေ့ကို ဘာမှ ပြန်ပေးဆပ်ဖို့ မလိုပါဘူး..။ အမေတစ် ယောက်ရဲ့တာဝန်ကို အမေလုပ်ခဲ့တာပါ..။ ပြီးတော့ အမေတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်တွေအတွက် သားက ပြန်လည် ပေးဆပ်ဖို့ဆိုတာ နည်းလမ်းလည်း မရှိပါဘူးကွယ်…"
ကျွန်တော်ကလည်း မကျေနပ်နိုင် သေးပဲ အမေ့ကို တစ်ခုခု ပြန်လည် ပေးဆပ်နိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားပြီး ပြောဆိုနေသလို.. အမေကလည်း တောက်လျှောက်ကို ငြင်းနေပါတော့တယ်..။ နောက်ဆုံး..
"ကဲ..ကဲ… သားဒီလောက်တောင် ဆန္ဒရှိနေရင်လည်း.. ဒီည သား အမေ့အိပ်ယာမှာ အမေနဲ့အတူ လာအိပ်… သားငယ်ငယ်တုန်းက အတိုင်းပေါ့… အဲ့ဒါ အမေ့ဆန္ဒပဲ…"
ကျွန်တော် ပျော်ရွင်စွာ မဆိုင်းမတွပဲ အမေ့ဆန္ဒကို လိုက်လျောဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်..။
ကျွန်တော် အမေအိပ်ယာပေါ်မှာ အမေနဲ့အတူ အိပ်ပျော်သွားပြီး ခဏအကြာမှာပဲ အမေဟာ အိပ်ယာက ထပြီး မီးဖိုချောင်ထဲက ရေပုံးတစ်ပုံးကို ယူလာတယ်..။ ပြီးတော့ ရေခွက်တစ်ခွက်နဲ့ ကျွန်တော့် အိပ်ယာဘက်အခြမ်းကို လောင်းလိုက်တယ်..။ အိပ်ချင်မူးတူး ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ စိုတွေ့တဲ့အထိအတွေ့ကြောင့် တစ်ခြား အိပ်ယာဘက်ခြမ်းကို ကိုယ်ကိုလှိမ့်ပြီး ပြောင်းအိပ်လိုက် တယ်…. ကျွန်တော် ပြန်အိပ်ပျော်သွားတာနဲ့ အမေဟာ တစ်ခြားဘက်ကို ထပ်ပြီး အိပ်ယာခင်းပေါ်ကို ရေတွေ ထပ်လောင်းချလိုက်တယ်..။
ရေစိုတဲ့အထိအတွေ့ကြောင့် ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်တော်နိုးလာခဲ့ပြီး အိပ်ယာတစ်ခုလုံး စိုရွှဲနေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်..။ အမေကတော့ လက်ထဲမှာ ခွက်နဲ့ ရေပုံးကိုင်ပြီး ကုတင်ဘေးမှာ ရပ်နေပါတယ်.။ ကျွန်တော် စိတ်ဆိုးစွာနဲ့ပဲ
"အမေ ဘာလုပ်နေတာလဲ..။ ဒီမှာ ကျွန်တော် အိပ်လို့တောင် မရတော့ဘူး..။ ကုတင် တစ်ခုလုံး လည်း စိုရွှဲနေတာပဲ..။ အမေ သားကို ဒီလို ရေစိုနေတဲ့နေရာမှာ အိပ်စေချင်နေတာလား.."
"အမေ သားငယ်ငယ်တုန်းက.. သားရှုးပေါက်ချလို့ စိုနေတဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာ အိပ်ခဲ့တယ်..။ သားရဲ့ သေးစိုနေတဲ့ ဘောင်းဘီကိုလဲပေးပြီး ခြောက်တဲ့ဘက်ခြမ်းမှာ သိပ်ခဲ့သလို အမေကတော့ စိုတဲ့ အခြမ်း မှာ အိပ်ခဲ့တယ်..။ သားက အမေ့ကို တစ်ခုခု ပြန်လည် ပေးဆပ်ချင်တယ်ဆို..။ ဒီလို စိုနေတဲ့ ကုတင် ပေါ်မှာ သား တစ်ညလောက် အမေနဲ့အတူ အိပ်ပေးနိုင်မလား….."
သင်ခန်းစာ ။ ။ လောကမှာ ရှိသမျှ အကြွေးတွေအကုန်လုံးကို ပြန်ဆပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်..။ ဒါပေမယ့် အမေတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ စွန့်လွတ် အနစ်နာခံမှုတွေကိုတော့ ပြန်ဆပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး..။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အမေရဲ့ သွေးသား အပိုင်းအစတွေ စုစည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်..။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့မေ့ဖို့မသင့်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမေတွေက ဒါကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ထားလို့ပါပဲ..။
ကျွန်တော် သိပါတယ်.. ဒီအချိန်မှာ သင် …အမေ့ ကို သတိရ လွမ်းစွတ် နေပါလိမ့် မယ်..။ ချက်ချင်းပဲ သင့်အမေကို ပွေ့ဖက်ပြီး "အမေ့ကို ချစ်တယ်" လို့ပြောလိုက်ပါ..။ အဝေးမှာ ရောက်နေရင် ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ..။ သင်နဲ့အတူ ရှိမနေတော့ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်နှလုံးသားထဲမှာ ဒီစကားလေးကို အမြဲတမ်းသိမ်းဆည်းထားလိုက်ပါ..။
စာရေးသူ Aung Htun Oo ရေးခဲ့ချိန် 8:25 AM